I-horoscope eyona nto ihamba phambili kuyo yonke impawu ze-zodiac
Iminyaka elishumi yokugqibela kaMeyi iza. I-Spring ihamba kakuhle ehlotyeni kwaye iingcamango zikhawuleza kumabhankana ashushu, kwendalo. Nangona kunjalo, umntu akafanele akhohlwe ngomsebenzi. Ukufudumala imali encinci akufanele ukuphazamise izicwangciso zakho zobungqina. Kwaye ukuba sikugcine kakuhle, sinika i-horoscope engcono kwiimpawu zezodiac zoMeyi-Juni 2010. Imihla yokugqibela kaMeyi noJuni iya kufana neenkcukacha zeenkwenkwezi, ngoko ke iziphakamiso ziya kuba ziqhelekileyo ekupheleni kukaMeyi noJuni. Kodwa iintsuku eziphumelelayo kwaye ezinzima ziboniswa kuphela ngoJuni.
NgoJuni yinyanga yokuqala yehlobo. Kusekuqaleni kwayo, ukugqithiseka kwethemba kuya kubangela isisombululo esiphumeleleyo kwimicimbi yezoqoqosho kunye nemicimbi. Ungesabi ukufaka izicwangciso zakho zasendle. Kwaye ukuphela kwenyanga kuzo zonke iimpawu ze-zodiac ngumzuzu ofanelekileyo wokufunda into entsha.
I-horoscope ephambili ye-Aries ithi akukho mfuneko yokuba uhlale ixesha elide. Ixesha kunye nexesha, iimbuzo eziphuthumayo ziya kuvela ekhaya, ngoko-ke emsebenzini, kwaye akukho namnye kubo oza kuzibamba ngaphandle kokuthatha inxaxheba. Kungaba yimfuneko ukuqhubeka kwakhona kwimeko, eyayihlehliselwa kanye ngexesha elide. NgoJuni 7-8, qaphela ngakumbi kwivili kunye nomsebenzi: uya kuba yintliziyo engekhoyo kwaye uphefumlelwe ngokuza kwehlobo. Kwinqanaba lesibini le nyanga, ukunyamekela kwakho kunye nokuqwalaselwa kuya kufunwa ngumntu osondelene nawe, ngoko ke ungacwangcisi izinto ezibalulekileyo emsebenzini. Kwaye emva kowe-20 uya kuziva ukuba ukhulula ngamandla. Musa ukuwachitha, kungcono ungene kwimidlalo! Iintsuku eziphumelelayo: 15, 18, 27. Kunzima: 7, 21, 30.
I-Taurus : (21.04 - 21.05).
Ngokutsho kwe-horoscope, ekuqaleni kukaJuni okanye kwiintsuku zokugqibela zikaMeyi unokuba nethuba elitsha elithandayo. Ixesha lokuya kwiikhosi kunye neengxoxo eziphathekayo okanye ukungena kwesikolo. Uhambo olukhenketho olufanelekileyo kakhulu kwisiqingatha sesibini kaJuni luya kuba mnandi kwaye lunolwazi. Ukususela ngomhla we-15 ukuya ku-21 kaJuni, qalisa ukuthetha ngokucokisekileyo kunye nomntu othandayo, kodwa ungaxhasi. Ngaphandle koko, unokucinga ukuba uyeke ukumthanda. I-10 yeshumi kaJuni ilungele iholide ephumayo kunye neentsapho kunye nemisebenzi yasekhaya. Iintsuku eziphumelelayo: 6, 13, 29. Eziyinkimbinkimbi: 8, 16, 21.
Kwiminyaka emibili yokuqala kaJuni, uGemini unethuba lokuzibonakalisa emsebenzini kumgangatho ophezulu. Ezi zeziganeko ze-horoscope efanelekileyo. Unokubonisa ngokubanzi izakhono zakho zentlangano kwaye usebenzise iitalente ezifihliweyo. Kodwa ngomhla wesi-7 no-8, qaphela ngexesha lokuhlawulwa kwemali kwaye ugweme nayiphina ingozi yemali. Ekupheleni kukaMeyi ungaba nezicwangciso ezintsha kunye neengcinga. Ukuqala kwehlobo lixesha elimangalisayo lobudlelwano bobuhlobo kunye noqhagamshelwano olunobungane. Iintsuku eziphumelelayo: 9, 15, 18, 27, 28. Kunzima: 8, 17, 30.
I-Cancer : (22.06 - 23.07).
NgoJuni, ukuthandwa kwakho kwinkampani yabahlobo, oogxa nabo, abaqhelana nabo baya kwandisa ngokubonakalayo. Ukuba usebenza kakhulu nabantu, umsebenzi wakho uya kuphinda ukhuphuke. Mhlawumbi abantu abatsha abanolwazi, kunye nokuqala kwintando enobudlelwane. Phakathi noJuni unokwenza uhambo olumnandi. Emva koJuni 18, kufuneka uhlangabezane neemeko ezinzima neziyimfuneko. Yaye le nyanga iya kuphelisa ngentshiseko yothando: sebenzisa iinqabetho zakho kwaye ungesabi ukuba uziqwalasele. Iintsuku eziphumelelayo: 2, 12, 27. Kunzima: 7, 8, 16, 21.
Iingonyama ngo-Meyi noJuni ziya kufana nokuthanda ngothando kunye nemicimbi yezezimali. Unokuqala nokuqala ibhizinisi elidibeneyo kunye nomthandayo. Ngokwexesha elizayo inyanga ezayo, ngaphandle kwexesha ukusuka kwi-15 ukuya kweyesi-21, ilungele ukwenza izigqibo zoshishino. Le mihla, akufanele ulindele ukuphumelela ngemali. Ngomnyaka wesithathu unokufumana isiphumo esiza kukunceda ukuba uqhubele phambili kumsebenzi wakho, okanye ugqibe isivumelwano esinenzuzo. Ekupheleni kukaJuni, abahlobo abadala okanye izihlobo ezikude ziya kuzikhumbuza. Kwaye inxalenye engcono kukuba uya kuvuya ngayo! Iintsuku eziphumelelayo: 6,16,27,29. Inkambiso: 8, 21, 30.
NgoMeyi, naluphi na unxibelelwano oluza kukuzisa kuphela. Ukuba unenkxalabo malunga nokuxhaphaza ekusebenzelaneni nomntu osondeleyo okanye ngabahlobo bakho, ngoku unelungelo lokwenene lokwenza izinto kakuhle. Hamba uqale ukwenza izivumelwano, zama ukuqonda imbono yombono olwahlukileyo, kwaye ungayifumana indlela efanelekileyo kakhulu yokuphuma kwimeko. Iyeshumi leminyaka yesibini kaJuni iya kukukholisa ngamathuba amashishini afanelekileyo. Kukhona ithuba lokunyuka kwelinye iqela eliphezulu kwinqanaba lomsebenzi. Iintsuku eziphumelelayo: 9, 15, 18, 27, 28. Kunzima: 8, 17, 30.
Izilinganiso : (24.09 - 23.10).
Kumsebenzi nakwintsapho unkosikazi wale meko. Isenzo esinamandla, ungatshintsha imeko yezoshishino kwindlela oyifunayo. NgoJuni inyanga enhle yokufumana ulwazi olutsha, kunye nokudlulisela ulwazi lwakho kubalingane abaselula. Ukuhamba nohambo lokuzonwabisa luya kuphumelela. Ngomhla ka-Juni 15-21 kulo nyaka, ukuxhatshazwa emsebenzini akukhangeli. Ukuba awuqhubeki kakhulu, abayi kukulimaza. Kwiminyaka yeshumi elinesibini lwenyanga yokuqala yehlobo, ukubikezela ngeenkwenkwezi kulungile kakhulu ekuthengeni okuphumelelayo kunye nentsebenzo. Iintsuku eziphumelelayo: 6.13, 29. Eziyinkimbinkimbi: 8, 16, 21.
Ngeli xesha, ubomi bomntu kunye nobudlelwane kunye nomthandi wakho uya kuthatha ingqalelo efanelekileyo. Mhlawumbi uya kufakwa yincwadi entsha enomdla. Ebudlelwaneni obukhoyo, ukujika okubalulekileyo kunokwenzeka. Zama ukuqala imicimbi yeburhulumenteni, ngaphandle koko ukunganeliseki komphathi akuyi kukugcina ulinde. Ukususela ngoJuni 15 ukuya ku-Juni 20, kukho ingqwalasela eninzi iya kuhlawulwa kwiinkxalabo ezinxulumene nabantwana. Ukuphela kukaMeyi-ixesha lokuguqulwa okusebenzayo endlwini, kunye nokunxibelelana nabazalwana, odade, abamelwane. Iintsuku eziphumelelayo: 13,18, 27. Ziyinkimbinkimbi: 7, 21, 30.
I-Sagittarius : (23.11 - 21.12).
Unalo lonke ithuba lokubonisa nokuqonda iingcali zakho ezifihlakeleyo. Yiya emsebenzini wakho oqhelekileyo ngokwengeziwe, ufike ngeendlela ezintsha zokusombulula imisebenzi eyaziwayo. Zama ukwenza konke owenzayo, ngakumbi ngokuhle. Musa ukuhlambalaza kumsebenzi omnandi kakhulu kuwe. Nguye onokukuzisa impumelelo engalindelekanga, kuquka nezinto eziphathekayo. Ubomi bakho bomntu kunye nosapho buya kuba nobutyebi. Emva koMeyi 22, unokuqala ngokulungelelanisa ukulungisa indlu okanye uququzelele nasiphi na isiganeko esisekhaya. Iintsuku eziphumelelayo: 6,13,27,29. Inkambiso: 7, 16, 21.
I-Capricorn : (22.12 - 20.01).
Kule nyanga kunye nenyanga ezayo uza kulawula ngokulula izinto zombini nezobugcisa. Ukuzinikezela kwakho kunamandla ngakumbi ngoku. Ngoko ke, ufuna iziqalo ezintsha zokuvula iphepha elitsha lobomi. Kwaye kuya kuba namathuba oku oku. Ngesibindi phambili! Ukuthatha kuphela imicimbi emitsha kunye neendlela zokubonakalisa izimvo ezintsha zilunge emva komhla ka-9 kuNhlangulana - emva kwendlela yakho akuyi kuba nayiphi na ingxaki. Unethuba lokuphumeza ngokukhawuleza iprojekthi ephambili yokuphucula indlu. Iintsuku eziphumelelayo: 6, 15, 29. Eziyinkimbinkimbi: 7, 8, 16, 17.
U-Aquarius : (21.01 - 19.02).
I-horoscope engcono kakhulu icebisa: Ungaphuthelwa ngamathuba amashishini afanelekileyo anokukunika inyanga kaJuni. Zonke iinjongo zakho ezijoliswe kumgangatho wezakhono ziya kuvuzwa ngemali enhle kakhulu kunye nokuqatshelwa koogxa. Qala iiprojekthi ezintsha kwiveki yesibini kaJuni, kwaye ngoMeyi, gxininisa ekuzaliseni iiprojekthi eziye zaqaliswa. Okubalulekayo kuya kuba yimiba yentsapho kunye nolwalamano kunye nezihlobo, ingakumbi nabadala. Ngomnyaka wesithathu kaJuni, unokuba ngumqalisi wentsapho yentsapho okanye umcimbi onobungane. Iintsuku eziphumelelayo: 9,15,28,29. Inkambiso: 8, 17, 21.
Iipisisi : (20.02 - 20.03).
Kwimihla ngemihla kaFebruwari, ekupheleni kukaMeyi-ekuqaleni kukaJuni yinkxalabo yokuxininisa, inzima ngumsebenzi kunye neengxaki zeentsapho. Abo bazalwa ngo-Matshi, babedlala-ngoku ngokubomi babo kuya kuba nemitsha emitsha kwaye inomdla. Banokuthatha inxaxheba kwimimangaliso engaqhelekanga, kwaye ixesha lobunzima neengxabano luya kuhlala lifutshane: ukususela ngoJuni 17 ukuya kuJuni 21. Emva kweJuni 23, yonke i-Pisces ilindele i-adventure yothando okanye intlanganiso ethembisa. Iintsuku eziphumelelayo: 6, 14, 27, 29. Eziyinkimbinkimbi: 8, 16, 21.
Sithemba ukuba ukubonga kwi-horoscope efanelekileyo kuyo yonke imiqondiso ye-zodiac unokugqiba kwizinto ezinkulu! Yiba nesibindi kwizenzo zakho, kholelwa kwiingcamango ezingcono kunye ezingekho phantsi. Ngaphambili kwehlobo, kwaye kunye nayo - ixesha elitsha, umdlala ebomini bakho!
Izimpawu eziza kubuyela kuwe
Unyaka woMvundla kwi-horoscope yasempuma
Imiqondiso yabantu ebusika
Uvumo olungcwele kuMnyaka omtsha omtsha
Izibonakaliso eziza kunceda ukukhangela inhlanhla kunye nobutyebi
Unokususa njani ukotshwa kwiingubo?
Isandwich nge marmalade "Abantwana"
Le miqondiso ye-zodiac ikulindele inhlanhla ngoSeptemba 2017
Indlela yokulungisa ilanga lomtshato ngomfana
Ukugubha kweendawo eziphezulu nezantsi
Indlela yokucela imali kumthandi?
Isobho kunye neebhere
Indlela yokuzilungelelanisa nolwalamano olutsha
Ngaba ukukrexeza kusebenza kwindawo yokusebenzela?
I-sauce esheshayo yenkukhu okanye idada
I-Horoscope ye-Aquarius Umfazi ngo-Julayi 2017
USergey Zhigunov waba nguyise
Ilayiti yelayisi ngeapulo